Sawirro: Xafladda Caleema Saarka Nabaddoonka Beesha Kulmis. – Calamada.com
calamada August 31, 2021 1 min read
Munaasibad ballaaran oo ay kasoo qayb galeen culimo, masuuliyiin, odayaal, waxgarad, cuqaal iyo marti sharaf kala duwan oo ka kala socday wilaayaadka Hiiraan iyo Sh/dhexe waxay ka dhacday deegaan hoos taga degmada Jalalaqsi, waxaana ujeedka xafladdan uu ahaa doorashada hoggaan islaami ah oo ay dooratay jifooyin ka mid ah beelwaynta Baada cadde oo ka mid ah beelaha dega wilaayada Hiiraan.
Beesha kulmis oo ay ku mideysan yihiin 5 jifi oo ka tirsan beesha Baada cadde ayaa goobta xafladda nabaddoon cusub oo ay ku midaysan yihiin ugu doortay Iidle Xassan ka dib markii uu geeriyooday Nabaddoonkii hore ee beesha Allaha u naxariistee nabaddoon Muuse Xaaji Maxamuud Nabaddoon Iidle ayaa noqon doona nabaddoonka cusub ee Kulmis.
Goobta ay xafladdu ka dhacaysay oo lagu soo xardhay raayaadka rasuulka Allaah SCW ubaxyo iyo boorar ka tarjumayay ujeedka xafladda waxaa ikhyaartii ka hadashay ka mid ahaa Wabar Cumar Wabar Cabdi Wabar Maxamed oo ah wabarka guud ee beesha Baada cadde.
Ugu dambayn waxay xafladdu kusoo dhamaatay jawi aad u qurux badan waxayn tani qayb ka tahay dedaallada iyo juhdiga ay maamullada islaamiga ah ee ka jira wilaayaadka dalka Soomaaliya ay ku bixinayaan beelaha Soomaaliyeed si loo helo hoggaan islaami ah oo beeshiisa ku hoggaamiyaha ku dhaqanka shareecada islaamka.
Halkan Ka Dhagayso Warbixinta Idaacadda Kuna Biir Channelkeenna Telegram.
Previous: Ciidamada Maraykanka Oo Isaga Dhamaaday Kaabul & Dabaaldagyo Billowday.
Next: Saraakiil Iyo Xubno Lagu Laayay Muqdisho Iyo Afgooye.